How to refill your energy after making love - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အိမျထောငျမှု တဈခုရယျ ဖွဈလာတဲ့ အခြိနျမှာ ပြျောရှငျစရာ ကွညျနူးစရာတှရှောဖှဖေို့ရာ …နစေ့ဉျ သှားလာလညျပတျမယျ၊ ဝါသနာ တူတာလေးတှေ လုပျကွမယျ၊ ဒါတှအေပွငျ အိပျရာ ပျေါက ကိစ်စလေးတှပေါ ဖနျတီးကွတာပေါ့… ဒီလို ခဈြရညျလူးပွီးကွတဲ့အခါမှာ အားအငျ ကုနျခမျးတာမြိုးတှေ ရှိတတျတာမို့ ပွနျလညျဖွညျ့တငျးဖို့ရာ နညျးလမျးလေးတှေ ပွောပွခငျြပါတယျ…
သာမနျ လိငျမှုကိစ်စပွုလုပျကွခွငျးဟာ အားအငျအမြားကွီး မကုနျခမျးနိုငျသလို စိတျကနြေပျမှုကိုလဲ ဖွဈစပေါတယျ …အကယျ၍ အားအငျ ကုနျခမျးသှားပါကလညျး ပုံမှနျစားသောကျခွငျးဖွငျ့ အားအငျ ပွနျပွညျ့စနေိုငျပါတယျ …
သို့သျော မိမိကို ပိုမိုအားကောငျးစတေဲ့ အစားအသောကျလေးတှလေညျး ရှိပါတယျ..
ကျောဖီ၊ green tea ၊ ဝိုငျနီ စတာတှဟော စိတျကို ပိုမို အားသနျစပေါတယျ…
ဟငျးနုနှယျရှကျ၊ ဂငျြး ၊ ကွကျသှနျဖွူ ၊ ငရုပျကောငျး၊ငရုပျပှ ၊ အာလူးစတဲ့ နစေ့ဉျဟငျးလြာထဲတှငျ အသုံးပွုနကြေ အသီးအရှကျတှမှော အားကောငျးစသေော အာနိသငျတှေ ပါပါသတဲ့..
ငှကျပြောသီး ၊ ဖရဲသီး ၊ထောပတျသီး၊ ၊သလဲသီး၊ ဘယျရီသီးတှနေဲ့ ဗိုကျတာမငျ စီ ကွှယျဝတဲ့ အသီးအနှံတှဟောဆိုရငျလဲ အကြိုးထူးစပေါတယျ..
ခြောကလကျနကျ(dark chocalate) ဟာဆိုရငျလညျး စိတျပငျပနျးမှုကို လြော့ကစြပွေီး သှေးလညျပတျမှုအား ကောငျးစတေဲ့အပွငျ ဆန်ဒ ပိုမိုပွီးမွောကျရနျ အသုံးဝငျပါတယျ…
ကွကျဥ ဟာဆိုရငျလညျး အားကောငျးစတေယျ.. စိတျပငျပနျးမှုကို လြော့ကွစသေလို တခွားသောကနျြးမာရေးအတှကျလဲ ကောငျးမှနျစတောမို့ စားသုံးသငျ့တာပေါ့…
ပုဇှနျ၊ ဂဏနျး၊ ကမာကောငျ အစရှိတဲ့ ပငျလယျစာတှမှောလဲ ဆီရိုတိုနငျဆိုတဲ့ ဓာတျကို ပိုအားကောငျးစပွေီး စိတျကို ပိုမိုလှုံ့ဆျောပေးနိုငျပါတယျ…
ထို့ပွငျ ခံတှငျးကနျြးမာရေးအတှကျကောငျးစသေလို အနံ့အသကျလဲ ပြောကျလှယျစတေဲ့ ” ပနျးသီး” ကို စားလိုကျရငျ ပိုသငျ့တျောပါတယျ…
ဒီလို အစားအသောကျတှေ အပွငျ မိမိရဲ့ စိတျကို ပိုမိုကောငျးမှနျစဖေို့ရနျ …
sport drinks သောကျလို့ရပါတယျ
sport drink ဟာဆိုရငျ ဆုံးရှုံးသှားတဲ့ ရဓောတျ၊ electrolyte ဓာတျနဲ့ အားအငျတှကေို ပွနျလညျဖွညျ့တငျးပေးနိုငျပါတယျ …
ကုနျဆုံးသှားခဲ့တဲ့ အားအငျတှကေို ပွနျလညျဖွညျ့တငျးဖို့ လုံလောကျတဲ့ အနားယူမှုရှိပါစေ…
မိမိစိတျခံစားမှုတှကေို မိမိခဈြသူအား ရငျဖှငျ့မယျ၊ တီးတိုးပွောမယျ …. ဒီလိုအားဖွငျ့ စိတျပငျပနျးမှုလဲ ပွပြေောကျစသေလို နှဈကိုယျကွား ရငျးနှီးမှုလဲ ပိုရစပေါတယျ…
သကျလုံကောငျးစတေဲ့အပွငျ မိမိကိုယျကို ပိုမို ယုံကွညျမှုရှိစပွေီး စိတျကိုလဲ ပိုမိုလှုံ့ဆျောပေးနိုငျပါတယျ…
ဒီလိုအားဖွငျ့ ပြျောရှငျဖှယျ အိမျထောငျရေးသုခကို ခံစားနိုငျပွီး အခဈြတှေ တိုးပှားနိုငျမယျလို့ အကွံပွုလကျြ….
အိမ်​​ထောင်​မှု တစ်​ခုရယ်​ ဖြစ်​လာတဲ့ အချိန်​မှာ ​ပျော်​ရွှင်​စရာ ကြည်​နူးစရာ​တွေရှာ​ဖွေဖို့ရာ ...​နေ့စဉ်​ သွားလာလည်​ပတ်​မယ်​၊​ ဝါသနာ တူတာ​လေး​တွေ လုပ်​ကြမယ်​၊ ဒါ​တွေအပြင်​ အိပ်​ရာ ​ပေါ်က ကိစ္စ​လေး​တွေပါ ဖန်​တီးကြတာ​ပေါ့... ဒီလို ချစ်​ရည်​လူးပြီးကြတဲ့အခါမှာ အားအင်​ ကုန်​ခမ်းတာမျိုး​တွေ ရှိတတ်​တာမို့ ပြန်​လည်​ဖြည့်​တင်းဖို့ရာ နည်းလမ်း​လေး​​တွေ ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​...
သာမန်​ လိင်​မှုကိစ္စပြုလုပ်​ကြခြင်းဟာ အားအင်​အများကြီး မကုန်​ခမ်းနိုင်​သလို စိတ်​​ကျေနပ်​မှုကိုလဲ ဖြစ်​​စေပါတယ်​ ...အကယ်​၍ အားအင်​ ကုန်​ခမ်းသွားပါကလည်း ပုံမှန်​​စား​သောက်​ခြင်းဖြင့်​ အားအင်​ ပြန်​ပြည့်​​စေနိုင်​ပါတယ်​ ...
သို့​သော်​ မိမိကို ပိုမိုအား​ကောင်း​စေတဲ့ အစားအ​သောက်​​လေး​တွေလည်း ရှိပါတယ်​..
​ကော်​ဖီ၊ green tea ၊ ဝိုင်​နီ စတာ​တွေဟာ စိတ်​ကို ပိုမို အားသန်​​စေပါတယ်​...
ဟင်းနုနွယ်​ရွက်​၊ ဂျင်း ၊ ကြက်​သွန်​ဖြူ ၊ ငရုပ်​​ကောင်း၊ငရုပ်​ပွ ၊ အာလူးစတဲ့ ​နေ့စဉ်​ဟင်းလျာ​ထဲတွင်​ အသုံးပြု​နေကျ အသီးအရွက်​တွေမှာ အား​ကောင်း​စေ​သော အာနိသင်​​တွေ ပါပါသတဲ့..
ငှက်​​ပျောသီး ၊ ဖရဲသီး ၊​ထောပတ်​သီး၊ ၊သလဲသီး၊ ဘယ်​ရီသီး​တွေနဲ့ ဗိုက်​တာမင်​ စီ ကြွယ်​ဝတဲ့ အသီးအနှံ​​တွေဟာဆိုရင်​လဲ အကျိုးထူး​စေပါတယ်​..
​ချောကလက်​နက်​(dark chocalate) ဟာဆိုရင်​လည်း စိတ်​ပင်​ပန်းမှုကို ​လျော့ကျ​စေပြီး ​သွေးလည်​ပတ်​မှုအား ​ကောင်း​စေတဲ့အပြင်​ ဆန္ဒ ပိုမိုပြီး​မြောက်​ရန်​ အသုံးဝင်ပါတယ်​...
ကြက်​ဥ ဟာဆိုရင်​လည်း အား​ကောင်း​စေတယ်​.. စိတ်​ပင်​ပန်းမှုကို ​လျော့ကြ​စေသလို တခြား​သောကျန်းမာ​ရေးအတွက်​လဲ ​ကောင်းမွန်​​စေတာမို့ စားသုံးသင့်​တာ​ပေါ့...
ပုဇွန်​၊ ဂဏန်း၊ ​ကမာ​ကောင်​ ​အစရှိတဲ့ ပင်​လယ်​စာ​တွေမှာလဲ ဆီရိုတိုနင်​ဆိုတဲ့ ဓာတ်​ကို ပိုအား​ကောင်း​စေပြီး စိတ်​ကို ပိုမိုလှုံ့​ဆော်​​ပေးနိုင်​ပါတယ်​...
ထို့ပြင်​ ခံတွင်းကျန်းမာ​ရေးအတွက်​​ကောင်း​စေသလို အနံ့အသက်​လဲ ​ပျောက်​လွယ်​​စေတဲ့ " ပန်းသီး" ​​ကို စားလိုက်​ရင်​ ပိုသင့်​​တော်​ပါတယ်​...
ဒီလို အစားအ​သောက်​​တွေ အပြင်​ မိမိရဲ့ စိတ်​ကို ပိုမို​ကောင်းမွန်​​စေဖို့ရန်​ ...
sport drinks ​​သောက်​လို့ရပါတယ်​
sport drink ဟာဆိုရင်​ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ​ရေဓာတ်​၊ electrolyte ဓာတ်​နဲ့ အားအင်​​တွေကို ပြန်​လည်​​ဖြည့်​တင်း​ပေးနိုင်​ပါတယ်​ ...
ကုန်​ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အားအင်​တွေကို ပြန်လည်​ဖြည့်​တင်းဖို့ လုံ​လောက်​တဲ့ အနားယူမှုရှိပါ​စေ...
မိမိစိတ်​ခံစားမှု​တွေကို မိမိချစ်​သူအား ရင်​ဖွင့်​မယ်​၊ တီးတိုး​ပြောမယ်​ .... ဒီလိုအားဖြင့်​ စိတ်ပင်​ပန်းမှုလဲ ​ပြေ​ပျောက်​​စေသလို နှစ်​ကိုယ်​ကြား ရင်းနှီးမှုလဲ ပိုရ​စေပါတယ်​...
သက်​လုံ​ကောင်း​စေတဲ့အပြင်​ မိမိကိုယ်​ကို ပိုမို ယုံကြည်​မှုရှိ​စေပြီး စိတ်​ကိုလဲ ပိုမိုလှုံ့ ဆော်​​ပေးနိုင်​ပါတယ်​...
ဒီလိုအားဖြင့်​ ​ပျော်​ရွှင်​ဖွယ်​ အိမ်​​ထောင်​​ရေးသုခကို ခံစားနိုင်​ပြီး အချစ်​​တွေ တိုးပွားနိုင်​မယ်​လို့ အကြံပြုလျက်​....